Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Iindaba zocingo » Inani elizinzileyo lokufa kwe-COVID eliphawulwe njengeNto eLungileyo
Ethetha neentatheli eGeneva, umphathi we-UN yezempilo, uTedros Adhanom Ghebreyesus, uthe "i-spike enkulu" iqhutywa kukwahluka kwe-Omicron, ethatha indawo yeDelta ngokukhawuleza phantse kuwo onke amazwe.
Ngaphandle kwenani lamatyala, ukusweleka okuxeliweyo qho ngeveki “kuhleli kuzinzile” ukusukela ngo-Okthobha kulo nyaka uphelileyo, uTedros wongeze, kumndilili wama-48,000. Inani lezigulana ezilaliswa esibhedlele liyanda kumazwe amaninzi, kodwa alikho kwinqanaba elibonwa kumaza angaphambili.
Uxelele iintatheli ukuba oku kungenzeka ngenxa yobunzima obuncitshisiweyo be-Omicron, kunye nokungakhuseleki okuxhaphakileyo kugonyo okanye usulelo lwangaphambili.
Ukufa kwe-50,000 kuninzi kakhulu
Kwinkosi ye-WHO, ngelixa i-Omicron ibangela isifo esincinci kuneDelta, ihlala iyintsholongwane eyingozi, ngakumbi kwabo bangogonywanga.
“Phantse amawaka angama-50 okufa ngeveki kukufa kwamawaka angama-50,” utshilo uTedros. "Ukufunda ukuphila nale ntsholongwane akuthethi ukuba sinako, okanye kufanele, samkele eli nani lokufa."
Kuye, umhlaba awukwazi "ukuvumela le ntsholongwane ukuba ihambe simahla" xa abantu abaninzi kwihlabathi liphela behlala bengagonywanga.
E-Afrika, umzekelo, ngaphezulu kwe-85 pesenti yabantu abangekafumani idosi enye yesitofu sokugonya.
“Asinakuliphelisa inqanaba lobhubhani ngaphandle kokuba sivale lo msantsa,” utshilo.
UTedros emva koko udwelise inkqubela phambili ejolise ekufikeleleni usukelo lokugonya ama-70 epesenti yabemi belizwe ngalinye phakathi kulo nyaka.
NgoDisemba, i-COVAX ithumele ngaphezulu kokuphindwe kabini inani leedosi ezisasazwe ngoNovemba. Kwiintsuku ezizayo, inyathelo lokuqala kufuneka lithumele idosi yesitofu sokugonya sebhiliyoni enye.
Ezinye zezithintelo zobonelelo ukusuka kulo nyaka uphelileyo nazo ziyaqala ukukhululeka, utshilo uTedros, kodwa kusenendlela ende ekufuneka ihambe.
Ukuza kuthi ga ngoku, amazwe angama-90 awakafikeleli kumyinge wama-40 eepesenti ekujoliswe kuwo, kwaye angama-36 kula mazwe agonye ngaphantsi kwe-10 leepesenti labemi bawo.
Amachiza amatsha okugonya
U-Tedros ukwaqaqambise ingxelo yethutyana evela kwiQela leeNgcebiso zobuGcisa le-WHO malunga ne-COVID-19 ye-COVID-XNUMX, ekhutshwe ngoLwesibini, egxininisa ukuba olunye ugonyo luyafuneka olunempembelelo enkulu ekuthinteleni usulelo.
Kude kube ziphuhlisiwe izitofu zokugonya, iingcali zichaze, ukubunjwa kwezitofu zokugonya zangoku kunokufuneka kuhlaziywe.
Iqela likwathe icebo lokugonya elisekwe kumthamo ophindaphindiweyo we-booster "akunakwenzeka ukuba lizinze."
NgokukaTedros, uninzi lwabantu abangeniswe ezibhedlele kwihlabathi liphela abagonywanga.
Kwangaxeshanye, ngelixa ugonyo luhlala lusebenza kakhulu ekuthinteleni izifo eziqatha nokufa, alukuthinteli ngokupheleleyo usulelo.
"Ukosuleleka okuninzi kuthetha ukulaliswa esibhedlele, ukufa kwabantu abaninzi, abantu abaninzi abangasebenziyo, kubandakanya ootitshala nabasebenzi bezempilo, kunye nomngcipheko wolunye uhlobo oluvelayo olusuleleka ngakumbi kwaye lubulale ngakumbi kune-Omicron", utshilo uTedros.
Inani elipheleleyo lamatyala likwathetha uxinzelelo olongezelelekileyo kubasebenzi bezempilo abasele benomthwalo ogqithisileyo kunye nabadiniweyo.
Uphononongo olupapashwe kulo nyaka uphelileyo lubonise ukuba ngaphezulu kwesinye kwabane abasebenzi bezempilo baye bafumana iingxaki zempilo yengqondo ngexesha lo bhubhani. Iinkcukacha ezivela kumazwe aliqela zikwabonisa ukuba abaninzi baye bacinga ngokuyishiya okanye bayishiyile imisebenzi yabo.
NgoLwesibini, i-WHO ibambe i-webinar yehlabathi, ebizinyaswe ngoogqirha abavela kwihlabathi liphela, kulawulo lwezonyango lwentsholongwane ngexesha lokukhulelwa, ukubeleka kunye nexesha lokuqala lokubeleka.
Njengoko bekutshiwo ngaphambili kulo bhubhani, abasetyhini abakhulelweyo abekho emngciphekweni omkhulu wokufumana i-COVID-19, kodwa ukuba bosulelekile, basemngciphekweni omkhulu wesifo esiqatha.
“Kungoko kubalulekile ukuba abasetyhini abakhulelweyo kuwo onke amazwe bafikelele kugonyo lokukhusela ubomi babo, kunye nobeentsana zabo,” utshilo uTedros.
Inkosi ye-arhente ikwacele ukuba abasetyhini abakhulelweyo babandakanywe kulingo lwezonyango kunyango olutsha kunye nezitofu zokugonya.
Ukwagxininise ukuba, ngethamsanqa, ukudluliselwa komama kusana kwi-utero okanye ngexesha lokuzalwa kunqabile kakhulu, kwaye akukho ntsholongwane isebenzayo ichongiwe kubisi lwebele.
Imeko kaNgxamiseko ibhengezwe eSri Lanka njenge-anti...
Izitena zeSolar ziguqula izakhiwo zibe ngamandla ombane...
Uphuhliso lweMarike yoNyango lweSifo seMeningococcal...
IMarike yeSirens: Uhlalutyo lweshishini lehlabathi kunye...
Iziphazamiso zeNeurological Ukutyhala uBuvuselelo obuNzulu beNgqondo...
Iiti ze-Iced zeswekile ezisezantsi Kanye ngexesha leepikiniki zasehlotyeni
UkuPhakanyiswa kweNtuthu okuTsha kwiFom yoLwalwe
Ukuvunywa kweSifundo esitsha samathumba aqinileyo kunye ne-Non-Hodgkin...
I-GVB Yazisa kwakhona iNkonzo yeTrolley yasimahla yaseGuåhan kuKhenketho...
Ukuhanjiswa kwe-insulin okuzenzekelayo okuzenzekelayo kubantu abanesifo seswekile
I-Ethiopian Airlines iqala kwakhona i-Addis Ababa yayo ...
I-St. Regis San Francisco yonyula uMpheki omtsha ...